आधा कम्पनहरूमा पोलिएको Google+ पेज छ Martech Zone
सर्वेक्षण गरिएका आधा कम्पनीहरूसँग Google+ पृष्ठ छ
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
हामी दौडे जुमेरंग पोल हाम्रो साइडबारमा गत केही हप्ताहरूमा कति कम्पनीले Google+ पृष्ठ अपनाएको छ भन्ने स्पष्ट चित्र प्राप्त गर्नका लागि। सर्वेक्षण परिणामहरू एक उत्तम विभाजन थिए ... केवल %०% पाठकहरूले भने कि उनीहरूको कम्पनीमा Google+ पृष्ठ थियो। जबकि यो कम लाग्न सक्छ, म सोच्छु कि वास्तविक संख्या धेरै कम हुन सक्छ। म अलि निराशावादी थिएँ कि धेरैले ती पाएका थिए।
हामीले हाम्रा ग्राहकहरूको प्रतिस्पर्धीलाई खोज्यौं, हामी उनीहरूलाइ Google+ मा फेला पार्न सक्दैनौं र यो ती कारणहरू हुन् जुन हामीले उनीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित हुन प्रोत्साहित गर्यौं। यहाँ हाम्रो ग्राहकहरु लाईफलाइन को एक उदाहरण छ मध्यपश्चिमामा सबै भन्दा ठूलो डाटा सेन्टर। तिनीहरूको बिक्रीको VP ले नियमित सामग्री राख्दै छ र राम्रो अनुसरण गरिरहेको छ।
हाम्रो अनुभवले देखाउँदछ कि प्रारम्भिक अपननको कारणले छिटो बढेको छ जब यो सोशल मिडियामा आउँदछ। यो आवश्यक छैन कि तपाईं आज युद्ध जित्न लाग्नु भएको छ ... तर यदि र जब सोशल साइटले अफ्ठ्यारो लिन्छ, तपाईंको प्रारम्भिक धर्मपिताले तपाईंलाई त्यहाँ एक नेता बनाएको छ। Google+ मा, जब म खोज्छु डेटा केन्द्रहरू, त्यहाँ केहि परिणामहरू छन्। पहिलो लाइफलाइन हो, अर्को डाटासेटर निर्माण कम्पनी हो, र अन्तिम क्यानाडाली डाटा सेन्टर कम्पनी हो।
लाइफलाइनमा डग र उसको टीमका लागि त्यो ठूलो समाचार हो। गुगल + मा पहिले नै लाखौं प्रयोगकर्ताहरू छन् तिनीहरू मध्ये धेरैले आफ्नो नेटवर्कहरू निर्माण गर्दै। कुनै प्रतिस्पर्धा नभएकोले, डगले केही प्रारम्भिक अनुयायीहरूलाई समात्न सक्छन् जुन उनी अघि नपुगेको हुन सक्छ र अगाडि-सोच, राम्रोसँग जडित डाटा सेन्टर विशेषज्ञको रूपमा मैदानमा आफ्नो झण्डा रोप्न सक्छ। यो एक रणनीतिक चाल हो जुन लाइफलाइनलाई उद्योगमा राम्रोसँग राख्न सक्दछ, लगानीमा तत्काल फिर्ता हुने रणनीति चाहिन्छ भन्ने छैन।
के तपाईले Google+ मा आफ्नो प्रतिस्पर्धाको अनुसन्धान गर्नुभयो? के तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले पहिले नै यस सामाजिक नेटवर्कमा शप र निर्माण अधिकार स्थापना गर्दै छन् जुन कडा बृद्धि भएको छ र केहि दिन फेसबुकलाई यसको पैसाको लागि रन दिन सक्छ? तपाईंले यो याद राख्नुपर्दैन कि यो बारे होईन तपाईं, यो जहाँ तपाइँको दर्शकहरु को बारे मा छ। डगले Google+ मा उसका श्रोताहरू भेट्टायो। तपाईंले पनि त्यहाँ आफ्नो फेला पार्ने बारेमा सोच्नु पर्छ!
टैग: गुगल स्थानगुगल प्लसगुगल प्लस पृष्ठGoogle +
AuthorRank के हो र किन यो महत्व राख्दछ
-मोबाइल तयार ईमेल बनाउनका लागि सल्लाहहरू